BisheshPati | Trusted Online News Protal in Nepal सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश भर्सेस मुख्य रजिष्ट्रार - BisheshPati
बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस ग¥यो । सोही बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई भने सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएका कानुन व्यवसायी सदस्य रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने कुरालाई सबैले स्वागत गरेपनि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कुरालाई भने धेरैले ‘प्रतिशोधको भावना’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रममा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको मर्यादाक्रम बराबर गरिएको छ । कानुनतः सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भनेको नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सरहकै पद हो । अनि मुख्य रजिष्ट्रार पद भनेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरहको पद हो । उच्च अदालतमा जाने न्यायाधीश मात्रैको पदचाहिँ सचिव सरहको पद हो । यतिबेला न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई सिफारिस गरेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पद भनेको सचिव सरहको पद हो, जबकि उनी यसअघि नै मुख्यसचिव (मुख्य रजिष्ट्रार) बनिसकेका छन् । यस अर्थमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको पद पदीय हिसाबले एक पद घटुवासहितको पद हो । अर्थात् मुख्य न्यायाधीश सरहको पद भएका व्यक्तिलाई यतिबेला न्यायाधीशमा मात्रै सिफारिस गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराई सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारलाई अपमान गरी घटुवा गरिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको सबैभन्दा उपल्लो पदमा पुगिसकेको मान्छेले सो पदको गरिमाको लागि पनि मर्यादाक्रम भन्दा तल सिफारिस भएर जानुहुँदैन । एउटा सहसचिव र मुख्य सचिव जाने एउटै ठाउँ हो भने सहसचिव भन्दा माथिका पदको औचित्य छैन । मुख्य रजिष्ट्रार पद खारेज गरौँ ।’सचिव भट्टराईका अनुसार मुख्य रजिष्ट्रारमाथि प्रतिशोध साँधेर उनलाई उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार सिफारिस गरिएको हो । भट्टराईले भने, ‘हामीले त मुख्य रजिष्ट्रारलाई भेटेर उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा जानुभन्दा बरु स्वतः रिटायर भएर जानुस् भनेका छौँ । यसबारेमा सोचेर विचार गर्नुहोस् भनेका छौँ, अब के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको विषय भयो ।’
के कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कुँवरसँग रुष्ट छन् ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गर्दा आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई असहयोग गरेको आरोप कुँवरमाथि लागेको थियो । तत्कालीन समयमा चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेकको फुलकोर्ट राख्न आग्रह गर्दा कुँवरले अस्वीकार गरेको, सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै प्रहरी बोलाएर कानुन व्यवसायीमाथि लाठी बर्साएको र प्रधानन्यायाधीशका गलत क्रियाकलापमा साथ दिएको आरोप केही न्यायाधीशले मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरमाथि लगाएका छन् ।
आन्दोलनका समयमा साथ नदिएको मात्रै नभई असहयोग नै गरेको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको बचाउका लागि व्यक्ति परिचालन गरेको, सर्वोच्चकै न्यायाधीशमाथि भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गराउन भूमिका खेलेको लगायतका आरोप सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले लगाएका छन् ।
आन्दोलनको समयमा गरिएको व्यवहार बिर्सिए पनि आन्दोलन सकिएर सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि कुँवरले असहयोग गरेको एक न्यायाधीशले आरोप लागए । ती न्यायाधीशले भने, ‘सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश भएर दीपक श्रीमान् आउनु भएको २५ दिनभन्दा बढी भयो । तर मुख्य रजिष्ट्रारले सर्वोच्च प्रशासनबारे कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ब्रिफिङ गर्नसमेत आवश्यक ठान्नुभएन । हिजो नेतृत्वको बचाउमा लाग्नुभयो, आज अहिलेको नेतृत्वको निर्देशन अनुसार काम गरौँ न त भन्दा पनि उहाँ मान्नुभएन । बरु अहिलेका छलफलमा भएका सबै कुराहरू चोलेन्द्र शमशेरकहाँ पु¥याउने काम गर्नुभयो । अदालतहरूको प्रशासनमा देखिएको समस्या हटाउनका लागि उहाँ तयार हुनुभएन । न्यायालय सुधारका बाँकी काममा उहाँ अनुदार हुनु भएपछि उहाँलाई विकल्प दिन भनिएको थियो । उहाँले कुनै विकल्प नदिनु भएपछि उहाँलाई प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउन लागिएको हो, यो न्यायालय सुधारकै एक काम हो भनेर बुझ्नुपर्ला ।’
कामु प्रधानन्यायाधीशले यसरी प्रतिशोध साँध्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीशले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश ज्यू ले हामीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । हामीले नै उहाँलाई विकल्प दिन लगाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएका थियौँ । यो सुझाव दिएको पनि ४/५ दिन भयो । उहाँले विकल्प नदिनु भएपछि न्याय परिषद्ले नै उहाँलाई विकल्प दिएको हुनसक्छ ।’
कामु प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले मागेका थिए विकल्प
सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि असहयोग गरेको र सर्वोच्चका कुराहरू खुरुखुरु निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पुराएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्काले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई चेम्बरमै बोलाएर विकल्प दिन भनेका थिए । मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले दिने विकल्प भनेको कि राजीनामा थियो कि उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नै जाने भन्ने हो । यसअघिका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएर गएका थिए भने मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै भएर गएका थिए ।
हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएका दीपककुमार कार्की सुरु देखिनै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाउन नहुने पक्षमा थिए । यसअघि नृपध्वज निरौलालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने कुरामा पनि कार्कीले असहमति जनाउँदै मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाउन माग गरेका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्को सदस्य रहेका कार्कीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न चाहेपनि उनलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न दिइएको थिएन । कार्कीलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नदिएपछि कार्कीले परिषद्को सिफारिसमा हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् ।
त्यसकारण पहिले आफैले राखेका अडानबाट बाहिर निस्किएर मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने पक्षमा कार्की थिएनन् । तर कुँवर न्याय प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहँदा आफूहरूलाई सहयोग नहुने भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कुँवरलाई त्यहाँबाट हटाउने पक्षमा पुगेका हुन् ।
रजिष्ट्रार पन्थीसँग पनि मागियो विकल्प
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्काले सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीसँग पनि विकल्प मागिएको स्रोतले बतायो । पन्थीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबाट हटाएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न जाने कि अन्यत्र सरुवा जाने भनेर विकल्प दिइएको छ । यद्यपि पन्थीले अहिलेसम्म विकल्प दिएका छैनन् । पन्थीले कुनै विकल्प नदिएपछि उनलाई अन्यत्र सरुवा गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई ल्याउन लागिएको छ । यदि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर गएको अवस्थामा देवेन्द्र ढकाललाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार बनाउने तयारी भएको श्रोतले बतायो । ढकाल २०५२ सालमा न्याय सेवामा अधिकृतबाट प्रवेश गरेका थिए । २०७५ माघ महिनासम्म हालका मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवरभन्दा माथि रहेका ढकाललाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले ७ दिनको फरकमा सचिवमा बढुवा गरेर जुनियर बनाइदिएका थिए ।
सिनियरलाई पाखा लगाएर मुख्य रजिष्ट्रार बनेका थिए कुँवर
हालका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमाथि सिनियरलाई पाखा लगाएर मुख्य रजिष्ट्रार बनेको आरोप छ । एक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले भने, ‘२०५५ भदौ २१ गते कुँवर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि उनी लामो समयसम्म हालका धेरै कर्मचारीभन्दा जुनियर नै थिए । तर चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनले फड्को मार्न थालेका हुन् । सिनियरलाई बढुवा नगरी चोलेन्द्रले उनलाई सचिव बनाइदिएका थिए । यसकारण उनी वरिष्ठता र क्षमताले भन्दा पनि कृपाले मुख्य रजिष्ट्रार बनेका थिए । अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु भनेको उनका लागि ठीकै हो ।’
हालका मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर २०६५ कात्तिक ५ गते उपसचिव बने । त्यसपछि २०६७ वैशाख ८ गते उनी सहसचिव बनेका थिए भने २०७५ माघ १४ गते सचिव बने ।
उनीभन्दा अगाडि नै सेवा प्रवेश गरेका देवेन्द्रराज ढकाल र नारायणप्रसाद पन्थीलाई अन्तिम समयमा उनले उछिनेका थिए । २०५२ मंसिर २४ गते न्याय सेवाको अधिकृतमा प्रवेश गरेका ढकाल र पन्थी २०५९ चैत्र २१ गते उपसचिव बनेका थिए । ढकाल २०६६ चैत १७ गते सहसचिव बनेका थिए भने पन्थी २०६८ साल माघ १५ गते मात्र सहचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिव बन्ने क्रममा भने कुँवर २०७५ माघ १४ मा सचिव बनाइए भने ढकाललाई त्यसको ७ दिनपछि २०७५ माघ २१ गते सचिव बनाइयो । अर्थात् सचिव बन्ने क्रममा ढकाललाई कुँवरभन्दा ७ दिन जुनियर बनाइएको थियो । पन्थी भने २०७६ वैशाख १७ गते मात्रै सचिव बनेका थिए ।
न्यायाधीशमा नगए के गर्लान् कुँवर ?
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई आफू उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नजाने बताएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि उनले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नजाने बताएको सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘कुँवरजीले सम्माननीय (कामु प्रधानन्यायाधीश) ज्यूलाई आफू उच्चको न्यायाधीश भएर जाँदिन भन्नु भएको छ रे । अब उहाँ उच्चको न्यायाधीश भएर नजाने भए पनि उहाँले मुख्य रजिष्ट्रारकै रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस्तो भएमा सायद उहाँले राजीनामा दिने विकल्प रोज्नुभएको पनि हुनसक्छ । वा टसल गरेरै आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउने सोच पनि हुनसक्छ । अब अहिले नै के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सर्वोच्च प्रशासनबाट एक्सन लिने तयारीमा कार्की
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुकार कार्कीनिकट श्रोतका अनुसार कार्कीले न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतभित्रै भएका भ्रष्टाचार र सेटिङ भत्काउनका लागि प्रशासनमा व्यापक फेरबदलको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उजुरी पाएपछि त्यसको छानबिनका लागि पनि कार्कीले मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई परिवर्तन गर्न खोजेको श्रोतले बतायो । उनले भने, ‘सम्माननीय ज्यूले प्रशासनको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेलगत्तै केही विषयमा छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । तर ती विषयमा छानबिन गर्न नदिन केही बिचौलियाको मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारमाथि दबाब र प्रभाव छ । त्यसैकारण पनि सम्माननीय ज्यू उनीहरूलाई सरुवा गर्ने वा अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’